Orinasa vokarin'ny ankizy - Mpanamboatra vokatra any Shina, mpamatsy
Ankizy Biber Fiber Jacquard Blanket
Ny vokatry ny fibra vita amin'ny volotsangana dia avy amin'ny volotsangana voajanahary, izay nalaina avy tamin'ny natiora, ary azo potehina ho azy eo amin'ny natiora, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny famahana ny loto.
Famoronana lamba: Polyester polyester 100%, ny lamba dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny fibre voajanahary miaro ny tontolo iainana averina amin'ny tavoahangin'i Coke. Ny tavoahangin'akano azo haverina simba dia potipotehina amin'ny sombin-javatra ary avy eo karakarain'ny fihodinana.
100% Blanket Polyester Recycled
Misy amboradara mahafatifaty sy azo tsapain-tanana eo amin'ny zorony ambany ankavanan'ny bodofotsy, izay endrika zanak'alika, mahafatifaty tokoa. Ity peta-kofehy ity dia azo namboarina, lamina biby toy ny alikakely, feso, dinosaurus sns. Ireo lamina ireo dia tena mahaliana, ary malaza amin'ny ankizy izy ireo.
Ny Sleepwrap dia torimaso azo antoka 'Wrapper' izay mampiroborobo ny torimaso tsara amin'ny alina ... ho an'ny zazakely sy ny ray aman-dreniny.
Kitapo fatoriana vita amin'ny plastika an-jaza
Volavolan-tenda mahitsy, kofehy landihazo malefaka sy malefaka, mifanakaiky hitazonana ny hafanana, afaka mihetsika malalaka sy malalaka ny zazakely! Ny famolavolana bokotra akaiky sy bokotra baoritra mahamora dia mora ho an'ny reny ny mitafy ho an'ny zazakely, mampihena ny fahatsapana fameperana ny zazakely.
Bibikely voninkazo voninkazo Bib
Lamba famaohana triatra zazakely, lamba lamba sosona roa sosona, ambony ambony sy roa, ny fanontana dia tsotra sady vaovao, mahafatifaty, mahafatifaty, tsara tarehy ary mora manintona ny sain'ny zazakely. Ny ambany vatan'ny bib dia azo aforitra amin'ny fitehirizana sy fanamboarana mora.
Ny eo anoloana dia vita amin'ny lamba landihazo madio, fitaovana voafantina tsara fotsiny ho an'ny fahasalaman'ny zazakely, azo sasana, anti-famonoana lamba tsara, malefaka, ahazoana aina sy aina azo anaovana lamba, fampisehoana hisitrohana rano tsara kokoa.
Fomba fanaovana pirinty zanak'ondry vita amin'ny lamba fotsy polyester
Ny endriny dia 100% Recycle Polyester.12 Ny tavoahangy plastika dia afaka manamboatra lamba firakotra iray.
Quilt, lamba firakotra ary ondana ny zaza maro karazana
Ondana, quilts ary lamba firakotra dia vokatra telo-in-iray an'ny ankizy ho an'ny lamba lamba, izay mora mivalona ary mora tehirizina ary mitondra. Na any an-trano, na any amin'ny akanin-jaza, na amin'ny toerana fitsangatsanganana, dia azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Afaka mamonitra lamba famaohana lohany ny ankizy
Misy lamba famaohana fandroana mahafatifaty miaraka amin'ny satrony, aza manahy momba ny hatsiaka amin'ny zazakely ao an-trano fandroana amin'ny ririnina, ny kitapo malefaka, malefaka sy malefaka, tsy manotra ny hoditry ny zazakely, mifoka sy malaina haingana, tsy mila mamafa fa miverina ary Aoriana, tsy maninona ny hatsiaka mamirifiry ny zazakely, mankafy ny fotoana fandroana.
Pataloha fanatanjahan-tena ho an'ny lehilahy, Palitao fanatanjahan-tena, Akanjo fohy fanatanjahan-tena haingam-pandeha, Lamba firakotra roa sosona, Fanodinana santionany sy famokarana, Akanjo fohy vita amin'ny ravina haingam-pandeha ho an'ny lehilahy,